Mahadum Ege ga-akpọ ndị ọrụ agụmakwụkwọ | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMahadum Ege ga-akpọ ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ
A ga-eweghachi ndị otu 2547 dị ka isiokwu ndị metụtara Iwu Iwu Elu Dị elu na Iwu maka Nkwalite na Nhoputa nke Ndị Otu.
Ndi akwukwo, 657 Civil Servants Iwu 48. ha kwesiri iru ihe nile ekwuputara na.
prọfesọ ndị na-eme ntụrụndụ ga-etinye akwụkwọ maka ndị ọrụ; 6, ikpuchi photocopy nke vitae, kaadị njirimara, otu foto, asambodo ndị agha, akwụkwọ agụmakwụkwọ (onye gụsịrị akwụkwọ, onye gụsịrị akwụkwọ, doctorate, akwụkwọ nnabata professorship), ndepụta mbipụta, asambodo asụsụ mba ọzọ, akwụkwọ sayensị na akwụkwọ. (isii) otu ma tinye akwụkwọ na Ngalaba Ahụ n'onwe ya.
akpakọrịta ọkachamara ndị na-eme ntụrụndụ ga-etinye akwụkwọ maka ndị ọrụ; 4, ikpuchi photocopy nke vitae, kaadị njirimara, otu foto, asambodo ndị agha, akwụkwọ agụmakwụkwọ (onye gụsịrị akwụkwọ, onye gụsịrị akwụkwọ, doctorate, akwụkwọ nnabata professorship), ndepụta mbipụta, asambodo asụsụ mba ọzọ, akwụkwọ sayensị na akwụkwọ. (anọ) ma tinye aka na Ngalaba Ahụ.
AKW .KWỌ AKW .KWỌ AKW .KWỌ AKACKỌ ndị na-eme ntụrụndụ ga-etinye akwụkwọ maka ndị ọrụ; 4, ikpuchi photocopy nke vitae, kaadị njirimara, otu foto, asambodo ndị agha, akwụkwọ agụmakwụkwọ (onye gụsịrị akwụkwọ, onye gụsịrị akwụkwọ, doctorate, akwụkwọ nnabata professorship), ndepụta mbipụta, asambodo asụsụ mba ọzọ, akwụkwọ sayensị na akwụkwọ. (anọ) faịlụ otu ga-etinye aka nke Deans of the Faculty / School / Institute Directorates.
1-Ngalaba Na-ahụ Maka Mkpakọrịta ga-anakwere ịha nhata nke diplọma ndị a nwetara site na mba ofesi.
2-Oge ngwụcha nke ngwa bụ ụbọchị 15 site na ụbọchị e bipụtara nke mgbasa ozi na Gazette Official (Oge Ikpeazụ: 17.12.2019)
3-Ndị ọrụ nke nzukọ ọhaneze ọ bụla (ọbụlagodi na ha arụbu ọrụ na mbụ) ga-enwerịrị akwụkwọ ikike zuru ezu nke sitere na ụlọ ọrụ ebe ha na-arụ ọrụ.
4-Ihe ndi choro n ’ulo akwukwo Mahadum Ege https://personeldb.ege.edu.tr nwere ike ruru na.
5-anyị Ad www.ege.edu.t bụ enwere ike iru ya.
6- Ha aghaghi imezu ihe ndi mmadu choro na Regulation on the Principles to be compplemented in the Ozizi Asụsụ Asụsụ Nkuzi na Asụsụ N’asụsụ N’agụmakwụkwọ kacha elu.
Ndị na - ahụ maka ndị ọrụ na Mahadum Ege University